အချစ်ကြီးလွန်းတဲ့ နေလင်းကျော်ကို ယနေ့ရုံးထုတ်ပြီဗျာ…. – အနုပညာရပ်ဝန်း
အချစ်ကြီးလွန်းတဲ့ နေလင်းကျော်ကို ယနေ့ရုံးထုတ်ပြီဗျာ….
မြန်မာအိုင်ဒေါ Season4ရဲ့ Top 11 Finalist တစ်ဦးဖြစ်သူ နေလင်းကျော်ကတော့ ထူးထူးခြားခြား ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုပိုနေသူတစ်ဦးပါ။ အရပ်ရှည်ရှည် ရုပ်ရည်ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ သန့်ပြန့်တဲ့ကောင်ချောလေးတစ်ယောက်မို့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေကြားမှာ နာမည်ကြီးနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေထဲမှာတော့ မိန်းကလေးပရိသတ်အများစုရဲ့ အားပေးမှုတွေကိုရရှိထားသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အချစ်ကြီးရင်အမျက်ကြီးတယ်နော်မှတ်ထားကြ အမျိုးသားထုကြီးအတွက်သင်ခန်းစာပဲ မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲဝင် နေလင်းကျော် အဖမ်းခံရတဲ့ သတင်းကအမှန်ပါ ပုဒ်မ ၃၇၇ နဲ့ သူ့အမျိုးသမီးကို ဓမ္မတာနဲ့ဆန့်ကျင်ပီးလုပ်တဲ့ပစ်မှုပါ သူအပေါ်အရမ်းချစ်ပီး အရမ်း ကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးကိုမှ လုပ်ရက်တော့ ကံကြီးထိုက်တာပဲ ထင်တယ်
သူနာမည်ပျက်မှာဆိုးလို့ သူ့အမျိုးသမီးက လက်ထပ်ထားတယ်ဆိုတာတောင် ဘယ်သူမှမပြောရက်ဘူး လက်ထပ်ထားတာ ငါးနှစ်နီးပါ ရှိပြီလို့သိရတယ် လက်ထပ်ထားတာကို လူသိမခံချင်တဲ့အပြင် တခြားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်တော့ ခံရပြီပေါ့လက်ထပ်စာချုပ်လေးရရင် ချပြပေးမယ် လောလောဆယ် နေလင်းကျော်ကို ဒေါပုံသာကေတ အချုပ်ထဲမှာ ထည့်ထားတယ် စက်တင်ဘာလ ၄ရက်နေ့ ဒီနေ့မှာ ရုံးထုတ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်…ရရှိတဲ့ သတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာမို့ ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအုံးနော်….
လျှို့ဝှက်လွန်းသူကြီး အောင်ရဲလင်း ရဲ့ ကောင်မလေးကို အလင်းပြလိုက်တဲ့ “ဟန်ငြိမ်းဦး”
ရင်ခုန်သံတွေ မြန်သွားရ လောက်အောင် ယဉ်ယဉ်လေး နဲ့ သူမ ရဲ့ အလှတရားတွေထုတ် ပြ လိုက်တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်